khadka waxsoosaarka bacriminta dabiiciga ah. - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Bacriminta dabiici ahaanta waxay siisaa ciidda maaddo dabiici ah, sidaas awgeedna waxay dhirta u siisaa nafaqooyin iyo gacan ka geysashada sidii loo dhisi lahaa nidaamyo carro caafimaad qaba. Bacriminta dabiiciga ah ayaa markaa ka kooban fursado ganacsi oo aad u ballaaran. Xaddidaaddaha tartiib-tartiibka ah iyo mamnuucidda isticmaalka bacriminta dalal badan iyo waaxyaha ay khuseyso, soo saarista bacriminta dabiiciga ah waxay noqon doontaa fursad ganacsi oo weyn.
Bacriminta dabiiciga ah ee geedka sida caadiga ah waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo ciidda oo ay u siiso nafaqooyin koritaanka dalagga. Waxay sidoo kale si dhakhso leh u burburi karaan markay galaan ciidda, iyagoo si dhakhso leh u sii daaya nafaqooyinka. Sababtoo ah bacriminta adag ee dabiiciga ah ayaa lagu nuugaa si tartiib tartiib ah, waxay ka sii dheereeyaan muddada badan bacriminta dabiiciga ah ee dareeraha ah. Adeegsiga bacriminta dabiiciga waxay si weyn hoos ugu dhigtay waxyeelada soo gaadhay dhirta lafteeda iyo deegaanka carrada.
Baahida loo qabo sii saarida bacriminta dabiiciga ah ee bacriminta ee bacriminta dabiiciga ah:
Bacriminta budada ayaa had iyo jeer lagu iibiyaa si jumlad ah qiimo jaban. Falanqaynta dheeraadka ah ee bacriminta dabiiciga ah ee budada ah waxay kordhin kartaa qiimaha nafaqada iyada oo la isku daro waxyaabaha kale sida humic acid, taas oo faa'iido u leh iibsadayaasha si kor loogu qaado kobaca nafaqada sare ee dalagyada iyo maalgashadayaasha inay ku iibiyaan qiimo ka fiican oo macquul ah.
Geeddi-socodka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah: kareyso - granulation - qalajinta - qaboojinta - shaandhaynta - baakadaha.
Waxaan bixinaa taageero adeeg farsamo oo xirfad leh, qorsheyn ku saleysan baahida macaamiisha, sawirada naqshadeynta, soo jeedinta dhismaha goobta, iwm.
Bixi habab wax soo saar oo kala duwan oo ah khadadka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah si loo daboolo baahida macaamiisha, qalabkuna waa sahlan yahay in la shaqeeyo.
1. Walaaq iyo gran gran
Intii lagu gudajiray howsha walaaqida, compost budada ah ayaa lagu qasi karaa walxaha ama foormulada la doonayo si kor loogu qaado qiimaha nafaqada. Kadib isticmaal granulator cusub oo bacrimiya si aad iskudarka uga dhigto jajabyo. Granulator bacriminta dabiiciyanka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo qurubyada ka caagan boodhka ee cabirka iyo qaabka la xakamayn karo. The granulator bacriminta cusub ee dabiiciga ah waxay qaadatay geedi socod xiran, ma leh dheecaan boodh oo neefsasho ah, iyo wax soo saar sareeya.
2. Qalalan oo qabow
Nidaamka qalajinta wuxuu ku habboon yahay warshad kasta oo soo saarta budada iyo walxaha adag ee adag. Qalajinta waxay yareyn kartaa heerka qoyaanka ee ka dhalanaya walxaha bacriminta dabiiciga ah, waxay yareyn kartaa heerkulka kuleylka illaa 30-40 ° C, iyo khadka wax soo saarka ee bacriminta dabiiciga ah wuxuu qaataa qalajiyaha rullaluistemadka iyo qaboojiyaha wax lagu xiro.
3. Baadhitaanka iyo baakadaha
Ka dib marka la isku daro, qaybaha bacriminta dabiiciga ah waa in la baaraa si loo helo cabbirka walxaha loo baahan yahay oo looga saaro qaybaha aan u dhigmin cabbirka qaybta sheyga. Mashiinka shaandheeyaha shaandheeya ayaa ah qalab shaandheeya oo caadi ah, kaas oo inta badan loo adeegsado kala soocidda alaabooyinka la dhammeeyay iyo kala duwanaanta alaabooyinka la dhammeeyay. Kala shaandhaynta ka dib, cabbirka walxaha isku eg ee walxaha bacriminta dabiiciga ah ayaa la miisaamaa oo lagu xiraa iyada oo loo marayo mashiin baako si otomaatig ah u qaadaya suunka xambaaraha